माघे संक्रान्तिमा तिलको लड्डु र खिचडी खानुको यस्तो छ वैज्ञानिक कारण - Khabar Break | Khabar Break
माघे संक्रान्तिमा तिलको लड्डु र खिचडी खानुको यस्तो छ वैज्ञानिक कारण
मकर संक्रान्तिको नामले समेत प्रचलित माघे संक्रान्तिका दिन घरघरमा खिचडीका साथमा तिल तथा गुडबाट बनेका परिकार सेवन गरिन्छ । यी खानपानसँग माघे संक्रान्तिको के सम्बन्ध छ रु किन तिलको लड्डु खाइन्छ रु किन खिचडी खाइन्छ ?
माघे संक्रान्तिको एउटा पौराणिक कथा छ । श्रीमद्भागवत तथा श्रीमदेवीभागवत महापूराणमा उल्लेख गरिए अनुसार शनिको आफ्ना पिता सुर्यदेवसित वैमनस्यता थियो । किनकी सुर्यदेवले शनिदेवको माता छायालाई उनको दोश्रो पत्नी संज्ञाको छोरा यमराजसित भेदभाद गर्दै गर्दा देखेका थिए । रुष्ट भएर सुर्यदेवले संज्ञा र उनको छोरा शनिलाई आफूबाट अलग गरिदिए । जसले गर्दा शनिदेव र छायाँले सुर्यदेवलाई कुष्ठ रोगको श्राप दिएका थिए ।
यमराजले आफ्नी सौतेनी आमा र भाई शनिलाई कष्ट भएको देखेर उनीहरुको कल्याणका लागि पिता सुर्यलाई निकै सम्झाए । यमराजले हारगुहार गरेपछि सुर्यदेव शनिको घर कुम्भमा पुगे । कुम्भ राशीमा सबै कुरा जलेका कारण त्यसबेला शनिदेवसित तिलबाहेक अरु केही थिएन । त्यसैले, शनिले आफूसित भएको कालो तिलले नै सुर्यदेवको पुजा आरधना गरे ।
शनिदेवको पुजाबाट खुशी भएर सुर्यदेवले शनिलाई आर्शीवाद दिदै भने, शनीको दोश्रो घर मकर राशीमा जब जब मेरो प्रवेश हुन्छ, म शनीको घर धन र धान्यले भरिपूर्ण गर्छु । तिलको कारण नै शनिदेवलाई आफ्नो वैभव प्राप्त भएको थियो । त्यसैले, शनिदेवलाई तिल प्रिय छ । यही घटना पश्चात्त मकर संक्रान्तिको पावन अवसरमा तिलद्धारा सुर्य तथा शनिको पूरा हुने गर्छ ।
तिलले उच्च रक्तचाप नियन्त्रण गर्न मद्दत गर्छ । कयौ अनुसन्धानहरुबाट प्राप्त नतिजाले जनाए अनुसार तिलले उच्च रक्तचाप कम गर्नुका साथै मुटु सम्बन्धि रोग कम गर्नमा मद्दत गर्छ । तिलमा रहेको म्याग्नेसियमले मधुमेहको जोखिम समेत कम गर्छ । फाइबर भएका कारण तिलले खाना पचाउने पाचन प्रक्रियालाई दुरुस्त राख्नुका साथै कब्जियतको समस्या कम गर्छ ।
माघे संक्रान्तिका दिन नेपालमा खिचडीलाई भोजनका रुपमा खाने चलन छ । नेपाल तथा छिमेकी मुलुक भारतमा चामलको उत्पादन धेरै हुने गर्छ । धेरैले मकर संक्रान्तिलाई नयाँ वर्षको रुपमा पनि मनाउने गर्छन् । जसले गर्दा उनीहरुले माघमा नयाँ चामल खाएर नयाँ वर्षको स्वागत गर्छन् ।
डेटिङमा सन्तुष्टि नभएको भन्दै आमाले बेचिन् १६ लाखमा छोरी
रुसमा थप्पड हान्ने प्रतियोगितामा विजयीले प्रतिद्वन्द्वीलाई हानेको झापड भयो भाइरल( भिडियो सहित )
दुरुस्तै अर्को मेस्सी बनाउन सकिने वैज्ञानिकको दाबी
पेरिस, हङकङ र सिंगापुर विश्वका सवैभन्दा महङ्गा शहर
अमेरिकाकी एक महिलाले ९ मिनेटमा ६ बच्चालाई जन्म दिएर नयाँ रेकर्ड कायम, ४ छोरा, २ छोरी
एण्ड्रोइडका अधिकांश एन्टीभाइरस एपहरूले काम नगर्ने प्रमाणित
यौनसम्पर्क गर्ने बेला महिलाहरु किन बन्द गर्छन् आँखा ?
नोबेल शान्ति पुरस्कारका लागि १६ वर्षीया किशोरी मनोनयनमा